Horudhac: Villarreal vs Real Madrid… (Los Blancos oo indhaha ku haysa inay waddada guulaha La Liga dib ugu soo laabato) – Gool FM
Horudhac: Villarreal vs Real Madrid… (Los Blancos oo indhaha ku haysa inay waddada guulaha La Liga dib ugu soo laabato)
(Villarreal) 21 Nof 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa indhaha ku haysa inay wadada guulaha horyaalka La Liga dib ugu soo laabato marka ay kulan qeyb ka ah kal ciyaareedkan 2020-21 horyaalka Spain ay booqanayaan maanta oo Sabti ah naadiga Villarreal.
Los Blancos ayaa la dhibtoonaysa guuldarro 4-1 oo ay kala kulantay Valencia ka hor inta aan la aadin ciyaaraha herka caalami, waxaana ay fadhisaa kaalinta afaraad ee kala sarreynta horyaalka, waxaana ay labo dhibcood iyo labo boos ka dambeysaa Villarreal oo qaab ciyaareed wacan ku bilaabatay kal ciyaareedkan.
Taariikhda: Sabti 21 Nof 2020
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 18:15 Maqribnimo xilliga geeska Afrika.
Pervis Estupinan ayaa si buuxda taam u ah, laakiin qaab ciyaareedka Alfonso Pedraza ee daafaca bidix ayaa ka ilaalin kara safka koowaad ee Tababare Unai Emery todobaadkan.
Juan Foyth weli dhaawac ku maqan, taasoo la micno ah inaysan jiri doonin cadaadis saaran Pau Torres iyo Raul Albiol.
Francis Coquelin ayaa sidoo kale ku soo laabtay tartanka, laakiin Vicente Iborra ayaa la filayaa inuu khadka dhexe ka ciyaaro.
Karim Benzema ayaa la soo sheegayaa inuusan boqolkiiba boqol taam ahayn, halka Luka Jovic uu haatan la maqan yahay Korona Fayras, Mariano ayaa si macquul ah isku arki kara inuu ku soo bilowdo safka hore ee kulanka maanta.
Casemiro ayaa laga reebay kooxda Real Madrid kaddib markii laga helay Korona Fayras, laakiin Eden Hazard ayaa lagu soo daray.
Dani Carvajal ayaa laga yaabaa inuu dib ugu soo laabto taam ahaanshihiisa kaddib dhaawac jilibka ah waxaana laga yaabaa inuu ku soo bilowdo daafaca midig, halka Sergio Ramos uu ku maqan yahay dhaawac ka soo gaaray waajibaadka xulkiisa Spain, Eder Militao ayaa maqan sidaas darteed Nacho ayaa booskiisa buuxin doona.
Karim Benzema dhibaato yar qaba, waxaana laga yaabaa inuusan safarka kooxdiisa qeyb ka noqon.
>- Villarreal ayaa barbaro gashay saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda kula ciyaartay Kooxda Real Madrid tartammada oo dhan.
>- Kooxda Villarreal ayaa guuleysatay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Real Madrid ayaa la garaacin 18 ka mid ah 20-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday kooxda Villarreal tartammada oo dhan.
>- Real Madrid ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay Villarreal tartammada oo dhan.
>- Villarreal ayaa la dhisay ugu yaraan labo gool afarteedii kulan ee ugu dambeysay oo ay garoonkeeda ku dheeshay kulammada horyaalka La Liga.
>- Villarreal ayaa sidoo kale dhalisay labo gool afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku soo dhoweysay Real Madrid tartammada oo dhan.
Horudhac: Tottenham Hotspur vs Manchester City… (Spurs oo doonaysa inay hoggaanka la wareegto, xilli Pep Guardiola oo booqanayo Macallin Jose Mourinho)